२ वर्षपछि बल्ल लाइसेन्स! - Everest Dainik - News from Nepal
२ वर्षपछि बल्ल लाइसेन्स!
२०७६, ३ फाल्गुन शनिबार
काठमाडौंः भक्तपुरका कुमार नगरकोटीले ट्रायल उत्तीर्ण गरेको दुई वर्षपछि बल्ल सवारी चालकको स्मार्ट अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाए । २०७४ फागुनमा उनले ट्रायल उत्तीर्ण गरेका थिए ।
यस बीचमा आठ पटक यातायात कार्यालय धाय तर प्रिन्ट भएको छैन भन्दै फर्किनुपर्यो । बुधबार यातायात व्यवस्था विभाग नयाँ बानेश्वरमा लाइन बसेर लाइसेन्स लिएका नगरकोटीले खुसी व्यक्त गर्न भने सकेनन् ।
याे पनि पढ्नुस लाइसेन्स वितरण स्थगित
नगरकोटीसँगै बुधबार विभागमा लाइनमा बसेका पूर्ण श्रेष्ठको समस्या पनि उस्तै छ । पहिला मोटरसाइकलको लाइसेन्स लिएका श्रेष्ठले डेढ वर्षअघि लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरे तर डेढ वर्ष कुरेपछि बल्ल लाइसेन्स आयो । उनको गुनासो छ– विभागले काम गर्न सक्दैन तर समस्या हामीले भोग्नुुपर्ने, रसिद देखाएर सवारी चलाउँदा ट्राफिकले कारबाही गर्छ, यसमा हाम्रो गल्ती होइन, एउटा लाइसेन्स लिँदा पनि हामी जनताले यति सास्ती भोग्नुपर्ने ?
प्रिन्ट गर्न बाँकी स्मार्ट लाइसेन्स आगामी छ महिनामा सम्पन्न हुने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । तीन वटा पुराना र एउटा मास प्रिन्टर तीन सिफ्टमा सञ्चालन गरिएकाले छ महिनामा सबै सकिने विभागको दाबी छ । दैनिक करिब पाँच हजार लाइसेन्स प्रिन्ट भइरहेको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले जानकारी दिए । विभागले दुई हप्तादेखि बिहान, दिउँसो र साँझ गरी तीन सिफ्टमा प्रिन्ट मेसिन सञ्चालन गरेको छ । महानिर्देशक हमाल मासप्रिन्टरबाट एक लाखभन्दा बढी प्रिन्ट भइसकेका छन्, तीन वटा पुराना प्रिन्टरले दैनिक करिब एक हजार प्रिन्ट गर्छन्, यही गतिमा कामअघि बढे पाँच/छ महिनामा सामान्य गतिमा आउछौँं, प्रिन्ट गर्न बाँकी सबै सक्छौँ भन्छन ।
याे पनि पढ्नुस तीन पटकभन्दा धेरै ट्राफिक नियम मिचे लाइसेन्स खारेज !
विगतमा समस्या भए पनि अहिले मेसिन वा कागजमा कुनै समस्या नभएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार हाल दैनिक तीन हजार लाइसेन्सको माग छ । महिनामा करिब ९० हजार लाइसेन्सको माग छ तर मागको ५० प्रतिशत मात्र प्रिन्ट गर्ने क्षमता भएकाले लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको
हमालको भनाइ छ ।
याे पनि पढ्नुस १८ वर्ष पुगेपछि मात्रै लाइसेन्स
थप अर्को मासप्रिन्टर ल्याउने तयारी भएको विभागले जनाएको छ । महानिर्देशक हमाल अर्को मासप्रिन्टर ल्याउन हामी प्रक्रियामा छौँ । अहिले मुद्रण विभागसँग छलफल भइरहेको छ भन्छन् । लाइसेन्स वितरणको काम प्रदेश सरकारले गर्ने भएकाले सातै प्रदेशबाट काम सुरु भएपछि समस्या नरहने विभागको दाबी छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिक्ष्इको हो ।
ट्याग्स: यातायात व्यवस्था विभागले, लाइसेन्स